Rep Power0Re: ငုပ်ဗီဇ....။
မောနင်း စတား Reply With Quote The Following3Users Say Thank You to morning-star For This Useful Post:
rolley, William Paul, ကိုထွန်း 09-07-2010 06:31 PM
a queen may mate with two or more tom cats over the length of the estrus cycle - up to 21 days, with an average of seven days. Although genetics of the queen may come into play, multi-colored kitten litters will often vividly demonstrate multiple mating. Some breeders of pedigreed cats keep the queen and chosen tom together for multiple matings to ensure that pregnancy will result. အောက် က ကိုး ကား ချက်အတွက် လင့် က ဒီမှာ...ပါ[ftp=ftp://en.wikipedia.org/wiki/cat]http://en.wikipedia.org/wiki/cat[/ftp]
Reply With Quote The Following3Users Say Thank You to morning-star For This Useful Post:
rolley, William Paul, ကိုထွန်း 09-08-2010 08:30 AM
Rep Power 8 Re: ငုပ်ဗီဇ....။
ရှင်းပြပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာပြောတဲ့ ပုံ အရ ကြောင်တကောင်မှာ မျိုးဥတဥထက်မကဆင်းနိုင်တဲ့ပုံဘဲ။ ကြောင်တော့ မသင်ခဲ့ ဘူးဘူး။ ၀က်ပဲသင်ခဲ့ ရတယ်။ ၀က်မှာ တော့ multiple ovulation ရှိတယ်လို့ သင်ခဲ့ မိတယ်ထင်တယ်။ Reply With Quote The Following3Users Say Thank You to AndrewSway For This Useful Post:
rolley, William Paul, ကိုထွန်း 09-10-2010 09:33 AM
Posts 1,067	Thanks 963
Rep Power 10 Re: ငုပ်ဗီဇ....။
အဆိုးဆုံး အခြေနေကို ရင်ဆိုင်လျက်။
ချစ်သူတိုင်း ချစ်ကြသူတိုင်း ချစ်သူနှင့်ကွေ့ကွင်းရခြင်း မချစ်မနှစ်သက်သော သူနဲ့ ပေါင်းသင်းနေထိုင်ရခြင်း မှကွေ့ကွင်းကြပါစေဗျာ ...
Reply With Quote The Following3Users Say Thank You to ကိုဦး For This Useful Post:
rolley, William Paul, ကိုထွန်း 09-25-2010 06:55 PM
အစ်ကိုဦး ရေ အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင်ဖြင့် Genetic Disorder တွေ နဲ့ Mutation အကြောင်းလေး ပါဖြည့် စွက်ပြီး ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ.... မောနင်းစတား
rolley, William Paul, ကိုထွန်း 11-03-2012 05:20 AM
Posts 1,469	Thanks 10,367
Rep Power9မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ သန္ဓေပြောင်းခြင်း heredity and mutation
မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ သန္ဓေပြောင်းခြင်း heredity and mutation တို့ကြောင့် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု revolution ဖြစ်ပေါါလာရပါတယ်။ မျိုးစေ့ သို့မဟုတ် ဗီဇဆိုတဲ့ gene ဟာ၊ cell ထဲမှာရှိနေပြီး၊ ပုံစံတူစေရန် ညွှန်ကြားပေးတဲ့ အရာတခုဖြစ်ပါတယ်။ molecular unit ဖြစ်တဲ့ gene ဟာ မျိုးရိုးဗီဇ heredity ကိုဖြစ်ပေါါစေတဲ့ သက်ရှိဇီဝခန္စာအဖွဲ့အစည်း living organism လည်းဖြစ်ပါတယ်။ DNA လို့ခေါါတဲ့ gene ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အရ ဆဲလ် cell မှ ပရိုတိန်း protein တွေကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ gene ဟာ ဆံပင်အညို၊ ဆံပင်အနက်၊ မျက်လုံးအပြာ၊ မျက်လုံးအနက်၊ အသားအဖြူ၊ အသားအညိုနဲ့ အရည်အတို အရှည်အပါအဝင်၊ စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို ညွှန်ကြားပေးတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ သားသမီးတွေ မိဘနဲ့ တူရတာကတော့၊ မိဘထံမှ မျိုးစေ့ သို့မဟုတ် ဗီဇဆိုတဲ့ gene ကိုလက်ခံရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ heredity ဆိုတဲ့ 'မျိုးရိုးဇာတိလက်ခံရရှိခြင်း' လည်းဖြစ်ပါတယ်။ DNA လို့ခေါါတဲ့ gene ဆိုတဲ့ မျိုးစေ့တွေဟာ ကန်ထဲမှာရှိနေသလို အလားသဏ္ဍန်တူပြီး၊ လူရဲ့ မျိုးစေ့တွေဟာ လူမျိုးစေ့ကန်၊ ဆင်ရဲ့မျိုးစေ့တွေဟာ ဆင်မျိုးစေ့ကန်နဲ့ လိပ်ရဲ့ မျိုးစေ့တွေဟာ လိပ်မျိုးစေ့ ကန်မှာ ရှိနေတယ်လို့ ဥပမာပေးပါရစေ။ လူမျိုးစေ့ကန်ထဲမှာ လူရဲ့ပုံသဏ္ဍန်၊ အရွယ်အစားအစရှိတာတွေကို ဖြစ်ပေါါစေတဲ့ လူရဲ့ မျိုးစေ့တွေရှိသလို၊ ဆင်နဲ့လိပ်တို့ရဲ့ လူမျိုးစေ့ကန်တွေထဲမှာလည်း၊ ဆင်နဲ့ လိပ်တို့ရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်၊ အရွယ်အစား အစရှိတာတွေကို ဖြစ်ပေါါစေတဲ့ မျိုးစေ့တွေရှိပါတယ်။
'ငုတ်ဗီဇ' ဟာ ဆွေမျိုးနီးစပ်သူတွေရဲ့၊ တူညီတဲ့မျိုးစေ့တွေမှတဆင့် သန္ဓေပြောင်းခြင်း heredity မှပေါါပေါက်လာတဲ့ မျိုးစေ့အသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သန္ဓေပြောင်းခြင်းမှပေါါပေါက်လာတဲ့ မျိုးစေ့အသစ်ဟာ မျိုးစေ့ကန်အတွင်းမှာ cell အသစ်ကို ဖြစ်ပေါါစေခြင်းမရှိပဲ၊ ပုန်းကွယ်နေတတ်ပါတယ်။ တချိန်ချိန်မှာ မျိုးရိုးဇာတိကို လက်ခံရရှိသူရဲ့ မျိုးစေ့ကန်အတွင်းမှာ ငုတ်ဗီဇ ဆိုတဲ့ recessive gene ကြောင့်၊ cell အသစ် ဖြစ်ပေါါလာတတ်သလို၊ နောက်တခါမှာတော့ ငုတ်ဗီဇ အနေနဲ့ ပြန်လည် ပုန်းကွယ်နေတတ်ပါတယ်။ Reference : ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း၊ အီဗော်လူးရှင်းစိတ်ပညာ၊ မုံရွေးစာအုပ်တိုက်၊ အောက်တိုဘာ၊ (၂၀၁၀) ခုနှစ်။ Pearson H (2006). "Genetics: what isagene?". Nature 441 (7092): 398–401,. The Evolution of Desire : Strategies of Human Mating, by David Buss, 1994.
Reply With Quote The Following3Users Say Thank You to ကိုထွန်း For This Useful Post:
AndrewSway, rolley, William Paul + Reply to Thread
All times are GMT +6.5. The time now is 11:54 AM.